Dumarku ma jecelyihiin galmada xanuunka ah? | Raganimo University
Dumarku ma jecelyihiin galmada xanuunka ah?
Ragg badan ayaa aaminsan in dumarku ay jecelyihiin in si adag oo awood badan ah loogu galmoodo. Waxay aaminsan yihiin in dumarku ay jecelyihiin galmada xanuunka ah ee marka sariirta la joogo gabadha aad loo xanuujiyo, iyadoo la isticmaalayo guska, gacmaha ama awood kale.
Horta way jiraan dumar jecel galmada nuucaas ah, iyadoo qaarkood ay waliba jecelyihiin in aad loo xanuujiyo. Qaar ayaa jecel in ninku uu xitaa doolaha ka dharbaaxo iyada oo foorar loogu galmoonayo, ama uu qoorta ka ceejiyo ama uu guska ugu garaaco si xad-dhaaf ah oo xawaare badan ah.
Laakiin waxaa aad muhiim u ah in arintaan laga wada hadlo oo uu jiro is-fahan. In aad iska aaminto in gacalisadaada ay jeceshahay in aad loo xanuujiyo waxaa laga yaabaa in ay tahay qalad oo aysan gabadhu ku raaxasaneyn qaabkaaga galmada. Muhiimada galmadu waa in labada qof ay ku raaxaystaan. Waa raxmad iyo jaceyl ee ma ahan dagaal iyo xoog.
Galmada macaan kuma xirna awood iyo xanuun ee waxay ku xirantahay sida aad u isticmaasho waqtiga aad sariirta ku qaadataan. Dumarka qaar badan ayaa jecel galmada dabacsan oo jaceylka iyo raxmada ku dhisan. Waxay jecelyihiin in meel kasta laga shumiyo si qaboow oo macaan. Waxay jecelyihiin in loogu galmoodo si degan balse joogto ah. Dumarku waxay aad u qiimeeyaan ficilka joogtada ah marka sariirta la joogo. Sida in ninku uu waqti fiican ku qaato hal ficil, kaasoo noqon kara shumis, leefid ama galmada guska oo aan kala go'lahayn.
Hadaba kala hadal gacalisadaada arimahaan oo tijaabiya waxyaabaha aad labadiinu ku raaxaysanaysaan balse marnaba ha ku sameyn hana ku qasbin wax aysan ku raaxaysanayn adiga oo iska fikiraya kaligaa.